နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 21 2019 | 1
နေ့စွဲငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ပွဲများမှတစ်ဦးနိဒါန်းစာကိုပေးပို့ဖို့အခွင့်အလမ်းရတ. ဒါကြောင့်ရှက်ဖြစ်ရကြဘူး; ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကစားပါလိမ့်မယ်.
သင်စတင်ခင်မှာ, ဒီမှာအရမ်းခံ့ဖြတ်ပြီးလာမယ့်သို့မဟုတ်စာဖတ်သူကို cringe အောင်ရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုပေါ်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များမှာ…
၏ – အက်ဥပဒေကိုအပြုသဘော!
တစ်ဦးကအလင်းကို ခံရ., အကောင်းမြင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်တို့နှင့်အတူရှိတစ်ဦးကနှစ်သက်ဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြင့်အခြားသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းကြမည်. အကယ်လို့သင်ဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်. ဝေဖန်ခံရသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်သင်အစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးအဘို့အသွားမလား?
မလုပ်ပါနှင့် – တစ်ဦး Novell ရေးပါ
အနည်းငယ်စာကြောင်းများစုံလင်ခြင်းရှိလိမ့်မည်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ဟာသတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်ပစ်လိုက်? သို့သော်သူတို့သည်တတိယအပိုဒ်ကိုရောက်ရှိမီသင်၏အသက်တာဇာတ်လမ်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုပိတ်ပစ်လူကိုရလိ​​မ့်မည်ဟုအပါအဝင်…
၏ – အသေးစိတ်အချို့သည် Include
ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုအသိပေးတူညီသောအရာကိုရှာနေကြသူအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ inbox ဆင်းကိုကျဉ်းမြောင်းစေပါလိမ့်မယ်. အနင်္ဂနွေ paragliding မှ Love? စုံလင်သော, တစ်စုံတစ်ဦးလွန်းပြုအံ့!
မလုပ်ပါနှင့် – တစ်ဦး cliche ဖြစ်
ဟုတ်ကဲ့သင်သည်ကောင်းမွန်စွာမျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့, မေတ္တာရှင်, သစ္စာရှိစသည်တို့ကို. ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှေ့တော်၌ကြားဖူးတယ်. စာဖတ်သူသင့်အကြောင်းသိရန်လိုသည်, သူတို့ကိုအခြားမည်သူမဆို၏ထွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်ချင်တယ်စေသည်တစ်ခုခုပေး.
အခုသင့်ရဲ့အနာဂတ်လက်တွဲဖော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံအပြီးဆီသို့ဦးတည်တဲ့ခြေလှမ်းနောက်ထပ်င် (ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်!), ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆက်စကားရေးသားရ, အချို့သောရက်စွဲများကို set up သင်နောက်တခါကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်…ယခုပင်စတင်ရန်.